Citizens Coalition for Change Inokwirira Mapurisa ekuMasvingo kuDare reHigh Court Mushure meKurambidzwa Kuita Musangano Wayo neSvondo
Kurume 18, 2022
Mapurisa eZimbabwe Republic Police svondo rapera akarambidza nhengo dzeCitizens Coalition for Change kuita musangano kuMarondera
Bato reCitizen Coalition for Change, (CCC) raendesa mapurisa emuMasvingo kudare redzimhosva repamusoro kwaraisa chikumbiro chechimbi-chimbi chekuti dare rimise danho ratorwa nemapurisa rekurambidza musangano waro wekutsvaga rutsigiro musi weSovondo munhandare yeRujeko .
Mapurisa anonzi apa zvikonzero zvekuti bato reZanu PF rinenge rine musangano miviri mudhorobha iri musi mumwechete uyu.
Mukuru wemapurisa mudunhu reMasvingo, Chief Superintendent Simangaliso Dube, vanyorera bato reCCC tsamba yekurizivisa kuti musangano waro warambidzwa kuenderera mberi nekuti rakatangirwa kukumbira mvumo neZanu PF.
Musangano uyu wanga uchitairisirwa kuitwa nemutungamiriri weCCC , VaNelson Chamisa. CCC iri kumiririrwa kudare naVaPhilip Shumba, VaOmen Mafa naMuzvare Isabel Moyo vekambani yemagweta ekwa Mutendi , Shumba and Partners.
VaShumba, avo vari kutungamirira chikwata chemagweta, ichi vati vaisa mapepa avo kudare repamusoro vachikumbira kuti danho remapurisa risendekwe padivi bato reCCC rienderere mberi nemusangano waro.
Mutsamba yavo, Chief Superintendent Dube, vatizve mapurisa haazokwanisi kuchengetedza runyararo nekuti Zanu PF ine misngano miviri munhandare dze Mamutse neMucheke.
Mapurisa ati kunogona kuzoita mhirizhonga pakati pevatsigiri vemapato maviri aya vakaita misangano yavo musi mumwe kunyange hazvo nhandare yeRujeko iri kure kure nenhandare mbiri dziri kuitirwa misangano neZanu PF.
Mutevedzeri wemutauriri weCCC munyika VaGift Ostallos Siziba, vapomera Zanu PF mhosva yekushandisa mapurisa mukuvarambidza misangano yavo.
Vamwe vanoti kushungurudzwa kuri kuitwa bato rinopikisa iri kuri kuenderera mberi zvichitevera kurambidzwa kwarakaita kuita musangano svondo rapfuura muRudhaka Stadium kuMarondera nekuGokwe vachinzi havana kutevedzera zvakana mutemo weMOPA.
Munyori wezve sarudzo muCCC mudunhu reMasvingo, VaGodfrey Madzikanda, vanoti bato ravo harisi kufara nekutenderedzwa kwaviri kuitwa vachirambirwa kupuwa mvumo yekuita misangano yavo.
Musi weChipiri bato reCCC nemutungamiriri waro VaChamisa vakarambidzwazve kuita musangano wavo wekutsvaga rutsigiro kuBinga.
Mumashoko kuvatori venhau, mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyathi vakati bato reCCC harisi kutevedzera zvinodiwa pamutemo kuti bato iri rite risati raita misangano yaro zvakafanana nekupa mapurisa nguva yakakwana.
Asi mutungamiti weCCC VaChamisa vanoti dambudziko harisi kumapurisa asi kuvakuru vakuru vari kuvatuma.
Asi mutevedzeri wemutungamirti weZanu PF vari zvakare mutewedzeri wemutungamiri wenyika VaConstantino Chiwenga vakati bato ravo hariaudze mapurisa zvekuita, asi vanofanira kutaurirana ne CCC kana vane zvichemo.
Bato reMDC-T rinotungamirirwa naVaDouglas Mwonzora, iro riri kupinda musarudzo dzema by-election seMDC Alliance, rinotiwo rakanyimwa mvumo nemapurisa yekuita musangano waro kuBinga nemusi weMuvhuro Unouya vachinzi mutungamiri wenyika VaEmmerson Mnangagwa vanenge vari mudunhu iri vachiitawo musangano nenhengo dzavo.
Asi mamwe mapato ari kukwikwidza musarudzo idzi anoti haasi kusangana nedambudziko rekurambidzwa kuita misangano yawo.
Nyaya ina Godfrey Mtimba
America neMuvhuro Yopemberera Makore Mazana Maviri neMakumi Mana neMatanhatu Yawana Kuzvitonga Kubva kuBritain
Vamwe veZvitoro Votara Mitengo yeZvinhu Zvavo neMari yeKunze
Dynamos Inodonhedza Mapoinzi Akakosha paHondo yeMukombe weCastle Lager Premiers Soccer League
Nyaya yeZimbabwe yeKusaremekedza Kodzero dzeVanhu Yotsviriridza kuMusangano weKodzero dzeVanhu weUN Human Rights Council kuGeneva
Hurukuro naVaCharles Mutama